လည်းအလေးပေးသောများ၏မှားယွင်းတဲ့သုံးသပ်အကဲဖြတ်ချက်တွေအပေါ်အဖြစ်လူသိများ accents ၏မှားယွင်းတဲ့သုံးသပ်အကဲဖြတ်ချက်တွေအပေါ်, မူရင်းတစ်ခုဖြစ်သည် မှားယွင်းတဲ့သုံးသပ်အကဲဖြတ်ချက်တွေအပေါ် အားဖြင့်ဖော်ပြထား အရစ္စတိုတယ် , စနစ်တကျဤကဲ့သို့သောယုတ္တိအမှားများကိုခွဲခြားခြင်းနှင့်ကိုဖော်ပြရန်ပထမဦးဆုံးအတွေးအခေါ်ပညာရှင်။ ဝဲသို့သော်သူကအင်္ဂလိပ်စပီကာယနေ့ထက်အရစ္စတိုတယ်ရဲ့ဇာတိဂရိဟာမှားယွင်းတဲ့သုံးသပ်အကဲဖြတ်ချက်တွေအပေါ်ပိုမိုခဲ့ပါတယ်။
ဝဲနေတဲ့ဝါကျတစ်ခုသို့မဟုတ်စကားလုံးအတွက် syllable အတွက်စကားလုံးပေါ်မှာနေရာချစစိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်ပါတယ်။ တဦးတည်းစာလုံးပေါင်းနှင့်အတူရေးသားထားသောစကားလုံးအရှင်မျိုးစုံစကားလုံးများကိုအတွက်တစ်ဦးထက်ပိုအသံထွက်နှင့်အဓိပ်ပာယျလို့ဂရိမှာဝဲအဓိပ်ပာယျအဘို့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်။
သူတို့ဟာ homographs (အတူတူရေးထားလျက်ရှိ၏), မဟုတ် homophones (တူညီတဲ့အသံ) ဖြစ်လိမ့်မည်။
homographs ဖြစ်ကြသည်မဟုတ် homophones (ကပျက်ယွင်းနေအငြင်းအခုံနှင့်အတူကဲ့သို့) ခိုင်လုံသော (နာမကျန်းဖြစ်နေသောသူတစ်ဦးဦး) နှင့်ခိုင်လုံသောအတွင်းစကားများဖြစ်လိမ့်မယ်လို့စကားလုံးနှစ်လုံး၏အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ဥပမာတစ်ခု။ (ထိုအလေးပေးထားရှိရာအဆိုပါရဲရင့်ဖော်ပြသည်။ ) နှစ်ဦးအတူတူပင်စာလုံးပေါင်း, သူတို့၏အဓိပ္ပာယ်ကိုသူတို့အသံထွက်ဘယ်လိုအပေါ်သို့မှီခိုနေကြသည်။
စာရေးသားဂရိဘယ်မှာတူညီတဲ့စာလုံးပေါင်းပေမယ့်ကွဲပြားခြားနားသောအဓိပ္ပါယ်များခဲ့ကြသည်စကားလုံးများကိုအတွက်စိတ်ဖိစီးမှုနေရာကလူကိုပြောပြဝဲအမှတ်အသားများမပါဝင်ခဲ့ချေ။ စာရေးသားဂရိအရှင်စကားလုံးဘာပေါ် မူတည်. စာသားရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုအတွက်သဲသဲကွဲကွဲမရှိသောရှိနိုငျတယျ။
"သင်အဘယ်ကြောင့်မာရိရဲ့မက်ဆေ့ခ်ျကိုအကြောင်းငါ့ကိုမေးနေကြတယ်? ငါသူမ၏မေးခွန်းတစ်ခုကိုအမျက်သိုနေကြ။ "
အဘယ်အရာကိုအထက်ပါကျမ်းပိုဒ်ကိုဆိုလိုသနည်း ယင်း၏တိကျမ်းစာ၌လာသည် form မှာကစာရေးဆရာမေးခွန်းနှင့် ပတ်သက်. စိတ်ဆိုးခဲ့တယ်ဆိုလိုနိုင်ဖြစ်စေမာရိသည်ဟုမေးနှင့်အမေးခှနျးကိုထပ်ထွက်စေလွှတ်တော်မူခဲ့ကြောင်းအကြောင်းပြောဆိုချင်, ဒါမှမဟုတ်မပြုခဲ့ခြင်းနှင့်စပီကာတစ်ခုပြန်ကြားချက်ကိုစောင့်ဆိုင်းနေသည်။ အဆိုပါကွဲပြားခြားနားသောအဓိပ္ပါယ်များအဆိုပါ (ပြောပြီ) စိတ်ဖိစီးမှုနှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းထားရှိရာအပေါ်သို့မှီခို "ဒေါသကြီး။ "
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဥပမာ #2မှလွဲ. ဤနေရာတွင်ဥပမာအဘယ်သူအားမျှအမှန်တကယ်အငြင်းပွားမှုများနှင့်တင်းကြပ်စွာစကားပြောဖြစ်ကြသည်မှားယွင်းတဲ့သုံးသပ်အကဲဖြတ်ချက်တွေအပေါ်သာအတွက်ဖြစ်ပွားနိုင်သည် အငြင်းပွားမှုများ , မသက်သက်ဆိုသို့မဟုတ်အာမေဍိတ်ပါ။ ဒါဟာအင်္ဂလိပ်လိုအသံထွက်၏မှားယွင်းတဲ့သုံးသပ်အကဲဖြတ်ချက်တွေအပေါ်ကတိပြုထားတဲ့အငြင်းအခုံအများကြီးကိုဖန်တီးရန်အလွန်ခက်ခဲပါလိမ့်မယ်, နှင့်ယနေ့ခေတ်သငျသညျအများအားဖြင့်သာယုတ္တိဗေဒနှင့်အငြင်းပွားမှုများနှင့် ပတ်သက်. ကျမ်းထဲမှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။
ကအနည်းငယ်အင်္ဂလိပ်စကားလုံးများကို homographs ထက် homophones ကြောင့်စိတ်ဖိစီးမှုဝါကျထဲမှာထက်အထူးသဖြင့်စကားများထဲတွင်နေရာရပါမည်အဘယ်အရပ်၏မေးခွန်းများကိုမှကြွလာသောအခါပိုပြီးင်ကဘာလဲ, သဲသဲကွဲကွဲမရှိသောပိုပြီးဘုံဖြစ်ကြသည်။ သငျသညျအယူအဆ၏အဲ့ဒီ့အများစုကန့်သတ်ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်ကပ်လျှင်သူများသည်သဲသဲကွဲကွဲမရှိသောသျော accents ၏မှားယွင်းတဲ့သုံးသပ်အကဲဖြတ်ချက်တွေအပေါ်မရှိကြပေ။ ခရစ္စတိုဖာဒဗလျူ Tindale, မှားယွင်းတဲ့သုံးသပ်အကဲဖြတ်ချက်တွေအပေါ်နှင့်အငြင်းအခုံစိစစ်ရေးအတွက်ရေးသားခဲ့သည်
"ဂရိ, အဓိပ္ပါယ်များတဲ့စကားလုံးအသံသြဇါသို့မဟုတ်ရှည်လျားသို့မဟုတ်အတိုကောက်အက္ခရာများ၏အသံထွက်၏မြင့်တက်ခြင်းနှင့်ပေါက်မှတဆင့် accented ခဲ့ပုံပေါ် မူတည်. ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ nonaccented ဘာသာဖြင့်, ပြဿနာကိုပျောက်သွားမှာတစ်သံပြောင်းပြဘာသာစကားသည် ဖြစ်. ။ ကိုယ်ကသာ insofar သဘောတရားပညာရှင်တွေရဲ့အဖြစ်ခေတ်ပြိုင်အကောင့်ထဲမှာဆက်ရှိနေသေး ဝါကျအတွက်အမျိုးမျိုးသောစကားများအပေါ်အလေးပေး၏ပြောင်းလဲမှုကိုဖုံးလွှမ်းရန်ကြောင့်ဖျက်နိုင်ကြသည်။
"ဒါပေမယ့်ဒီကစကားလုံးတစ်လုံး၏ဖွဲ့စည်းပုံမှာသို့မဟုတ်အမြစ်အားဖြင့်လမ်းလွဲခံရကပါဝင်ပတ်သက်ရသောဖော်ပြမှု၏ပုံစံ (သို့မဟုတ်ခွန်း၏ပုံ), နှင့်အတူအလေးပေးမဆိုကြင်နာထည့်သွင်းရန်ပြောင်းလဲသွားတယ်နှင့်နေသည်အထူးသဖြင့်အခါ, အရစ္စတိုတယ်စိတျထဲတှငျရှိခဲ့သောအရာကိုမဟုတ်ပါဘူး။ ခေတ်သစ် ဒီတိုအခက်အခဲယုတ္တိတန်သည်ဟုဆိုရမည်ဥပမာရှာဖွေတာတို့ပါဝင်သည်သူကိုစာရေးဆရာများ။ "
စကားစပ်ထဲကယူတစ်ခုခုနှင့်တစ်ဦးကြေညာချက်အပြည့်အဝအမှန်တရားအကြောင်းကိုစာဖတ်သူများလှည့်ဖြားဖို့စာလုံးစောင်းသို့မဟုတ် boldface တူသောသတ်ပုံနည်းစနစ်များအသုံးပြုခြင်း: သင် accents ၏ဟာမှားယွင်းတဲ့သုံးသပ်အကဲဖြတ်ချက်တွေအပေါ်တူတစ်ခုခုတွေ့မြင်အံ့သောငှါနည်းလမ်းနှစ်ခုရှိပါတယ်။ ယခင်ပုံမှန်အားဖြင့်၎င်း၏သီးခြားမှားယွင်းတဲ့သုံးသပ်အကဲဖြတ်ချက်တွေအပေါ်အဖြစ်ကုသ ဆက်စပ်မှားယွင်းတဲ့သုံးသပ်အကဲဖြတ်ချက်တွေအပေါ်ထဲကကိုးကား ။
"ကျနော့်ရဲ့အိမ်ထောင်ဖက်ကိုအကြှနျုပျအပျေါကိုလိမ်ရမည်ဖြစ်သည်: သူ '' ငါတကယ်ယခုသင်မချစ်ကြဘူး။ 'ပြောတယ်"
ဒီဥပမာထဲမှာ, နိဂုံး, အရှင်တစ်စုံတစ်ဦးသည်ယခုအခါခစျြတျောမူကွောငျးကိုညွှန်းသည်စကားလုံးသင်တို့အပေါ်မှာစိတ်ဖိစီးမှုအားမရအပေါ်သို့မူတည်ပါတယ်။
ကျနော်တို့တစ်နည်းပေါ်တွင်စိတ်ဖိစီးမှုကိုနေရာလျှင်မူကား, တကယ်သို့မဟုတ်မေတ္တာကဲ့သို့အဓိပ္ပာယ်ကိုအမျိုးမျိုးအရိပ်ထင်ရှားဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်လူတစ်ဦးရိုးရိုးလေးဥပမာဆက်ဆံရေးငြီးငွေ့စိုက်ပျိုးခဲ့သည်။
၏ဥပမာတစ်ခုအဖြစ်ပေးသောထုတ်ပြန်ချက်များတစ်ခုမှာ Amphiboly ၏မှားယွင်းတဲ့သုံးသပ်အကဲဖြတ်ချက်တွေအပေါ် မှာလည်း accents မှားယွင်းတဲ့သုံးသပ်အကဲဖြတ်ချက်တွေအပေါ်၏ဤမျိုးအဖြစ်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုနိုင်ပါသည်။ အောက်ပါဟုနိုင်ငံရေးသမားမြင်ယောင်ကြည့်ပါ:
အတိအကျအဘယ်အရာကိုသူမပြောပါဖို့ကြိုးစားနေသလဲ? ထိုလူအပေါင်းတို့သည်စီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှေးကွေးသောကွောငျ့သူမကအားလုံးအခွန်ဆန့်ကျင်ပါသလား? သို့မဟုတ်သူမသာစီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှေးကွေး၏အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်သောသူတို့အားအခွန်မှအစားလဲ? စာအရေးအသားအတွက်, ဒီဂုဏ်ထူး "အခွန်" ပြီးနောက်ကော်မာ၏ရှေ့မှောက်တွင်သို့မဟုတ်မရှိခြင်းနှင့်အတူရှင်းရှင်းလင်းလင်းလုပ်ပေမယ့်ပြောပြီသည့်အခါနိုင်ပါသည်, ထိုဝါကျအတွက်စိတ်ဖိစီးမှု၏တည်နေရာသင့်လျော်သောအနက်ကိုညွှန်ပြရာဖြစ်တယ်။ အဘယ်သူမျှမစိတ်ဖိစီးမှုပေးထားလျှင်, ထိုစပီကာ Amphiboly ၏မှားယွင်းတဲ့သုံးသပ်အကဲဖြတ်ချက်တွေအပေါ်ကျူးလွန်နေသည်။
မှန်ကန်သောစိတ်ဖိစီးမှုလျစ်လျူရှုသို့မဟုတ်ရိုးရှင်းစွာပျောက်ဆုံးသွားလျှင်မည်သို့ပင်ဆို, ပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ accents မှားယွင်းတဲ့သုံးသပ်အကဲဖြတ်ချက်တွေအပေါ်မှာပိုပြီးရှာဖွေနေပါသည်။ ထို့ကြောင့်ကြှနျုပျတို့သညျဤမှားယွင်းတဲ့သုံးသပ်အကဲဖြတ်ချက်တွေအပေါ်ပိုပြီးမကြာခဏမမူရင်းပီသို့မဟုတ်စာရေးဆရာအသုံးပြုပုံပေမယ့်အစားအခြားသူတွေ၏စကားကိုကိုးကားသို့မဟုတ်သတင်းပို့သူတစ်ဦးဦးကကျူးလွန်ကြောင်းတွေ့နိုင်ပါသည်။ ဒီဖက်ရှင်များတွင်သတင်းစာဆောင်းပါးအထက်ပါကိုးကားနှင့်မူရင်းဖိစီးရည်ရွယ်ခဲ့သောထက်အခြားတစ်ဦးအဓိပ်ပာယျကိုပေးပါလိမ့်မယ်။
စိတ်ဖိစီးမှုရေးသားထားသောပုံစံအတွက်ဖြတ်ပြီးလာတော်မမူကြောင်း sarcasm ဖော်ပြစကားပြောဘာသာစကားတွင်အသုံးပြုသည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တစ်ခါတစ်ရံမှာ, အမရေရာဒွိဟဖြစ်ပေါ်:
အထက်ပါမှတ်ချက်များအားလုံးသည်စာသားအဓိပ်ပာနိုင်ပေမယ့်ကျွန်ုပ်တို့ငေါ့အသံနည်းမှန်လမ်းမှန်ထဲမှာညာဘက်စကားလုံးများကိုအလေးပေးနှင့်အရှင်ရုံဆန့်ကျင်ဘက်ဆိုလိုလျှင်။ တခါတရံမှာ, သင်တန်း, စကားလုံးများကိုဂရုတစိုက်တမင်တကာထိုကဲ့သို့သောမရေရာဒွိဟပေးရန်ရွေးကောက်တော်မူကြသည်။
အထူးအခွင့်အရေး vs. တန်းတူအခွင့်အရေး
Leonardo da Vinci: Renaissance ကလူသားဝါဒ, Naturalist, အဆိုတော်, သိပ္ပံပညာရှင်
ဘုရားသခငျသညျအပျေါအဒေါ့ဖ်ဟစ်တလာ: Quotes ယုံကွညျနှင့်ယုံကြည်ခြင်းကို ဖော်ပြ.
Coricancha: Cusco အတွက် Sun က၏အင်ကာဘုရားကျောင်း
& Emerging သင်္ချာပညာရှင်တို့အတွက် IEP အစိတ်အပိုင်းရည်မှန်းချက်များ
အခါ Annunciation လား?
သင်ဟာတစ်စုံတစ်ဦးကပျောက်ဆုံးနေနေတဲ့အခါမှာ Quotes Soothing
ခဲ့မှုနှင့်အတူ ဖော်ပြ. Wish
Atom အကြောင်း 10 စိတ်ဝင်စားဖို့အချက်အလက်
တစ်ဦး Mass နာမ်ဆိုတာဘာလဲ
''့Dexter '' ရာသီ3ဇာတ်လမ်းအကျဥ်း
9 ဂန္ထဝင်ခရစ္စမတ်, Movies
1933 ဗြိတိန်ပွင့်လင်း: Shute များအတွက် PLAYOFF ဝင်း
ပြင်သစ် Adverb '' Enfin '' ( 'နောက်ဆုံးမှာနောက်ဆုံးအနေနဲ့') ကိုအသုံးပြုနည်းကိုဘယ်လို
Fidelio ဇာတ်လမ်းအကျဥ်း - အ Beethoven ရဲ့ One ၏ဇာတ်လမ်းနှင့်သာလျှင်အော်ပရာ
တစ်ဦး Narrative စာစီစာကုံးသို့မဟုတ်ခွန်းရေးထားလုပ်နည်း
စာဖတ်ခြင်း - ကျွမ်းကျင်မှုလိုအပ်ချက်ဖော်ထုတ်ခြင်း